दही खान नजान्दा बिष पनि बन्न सक्छ, होसीयार !! – Vision Khabar
दही खान नजान्दा बिष पनि बन्न सक्छ, होसीयार !!
। २० फाल्गुन २०७४, आईतवार २०:३८ मा प्रकाशित
एजेन्सी । दही सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा अनेक लाभ मिल्छ । तर, दही खाने समय र तरिकामा भने ख्याल गर्नुपर्छ । किनभने दही गुणकारी हुँदाहुँदै पनि यसको सेवन गर्ने विधि र समय थाहा नहुँदा यो विषाक्त बन्न पुग्छ ।